जब अध्याँरोमा जून देखियो « Naya Page
नेपालगन्ज, १० जेठ । रमजानको अन्तिम शुक्रबार । इदको पूर्वसन्ध्यामा नमाज पढ्न उनी घरमै आइपुगे । नेपालगन्ज–८ का ३० वर्षीय उनले खजुरास्थित कोरोना अस्पतालको आइसोलेसन कक्षमा नमाज पढेनन् । रोजा पनि बसेनन् । नेपालगन्ज–७ का ६० वर्षीय व्यक्तिसँगै उनका भान्जा मदरसामा पढ्न जान्थे ।
नेपालगन्जमा पहिलो पटक ती वृद्धमा संक्रमण पुष्टि भएको थियो । वृद्धको सम्पर्क पहिल्याउँदै जाँदा उनीसमेत भान्जा, उनकी आमा र बहिनीमा संक्रमण देखियो । आइसोलेसन सेन्टरमा तीन साता सकसपूर्ण तरिकाले बिताए । शारीरिक रूपमा ठिकै भए पनि मानसिक रूपमा ‘गलेको’ उनले बताए । ‘मनमनै डर लागिरहेको थियो,’ उनले भने, ‘आफ्नो भन्दा परिवारको चिन्ता बढी थियो ।’ घरमा बहिनी एक्लै थिइन् ।
चिकित्सकले आएर बिहीबार राति ‘अब तपाईं घर फर्कंदै हुनहुुन्छ’ भनेपछि उनी रातभरि सुत्न सकेनन् । टोलमा फर्किएपछि स्थानीयको स्वागतले झन् उत्साहित तुल्यायो । ‘कुनै युद्ध जितेर आएजस्तो लाग्यो,’ उनले भने, ‘हुन त कोरोनालाई जितेर आएको हुँ ।’
दैनिक मजदुरी गरेर परिवारको गुजारा चलाइरहेका थिए । घर आएपछि परिवार कसरी चलाउने भन्ने चिन्ता लागेको छ । ‘काम गर्ने मान्छे कोठाभित्र थुनिएर बस्नु परेको थियो,’ उनले भने, ‘अहिले सबै जना निको भएर आयौं, खुसी लागेको छ ।’
चिकित्सकले दुई सातासम्म घरभित्रै बस्न सल्लाह दिएका छन् । घरमा के गर्ने ? के नगर्ने सम्पूर्ण कुरा सम्झाएर पठाएका छन् । ‘सामाजिक दूरीमा ध्यान दिन भन्नुभएको छ,’ उनले भने, ‘आफूलाई बचाउन आफैंले सावधानी अपनाउनु बाहेक विकल्प रहेनछ ।’
उनीहरू आउँदो आइतबार वा सोमबार इद मनाउँदै छन् । ‘सायद आइतबार नै इदको सम्भावना छ,’ हल्का मुस्कानमा उनले भने, ‘हामीले आजै चाँद देख्यौं ।’ नेपालगन्ज–८ का ५७ वर्षीय वृद्धले २० दिनसम्म घामको झुल्को देख्न पाएनन् ।
शुक्रबार कोरोना जितेर सुशील कोइराला प्रखर क्यान्सर अस्पतालबाहिर जेठको गर्मी पनि उनलाई न्यानो लाग्यो । ‘आज तो धुप भी अच्छा लगा,’ उनले भने, ‘जीवन मे नयाँ अनुभव हुवा ।’ संक्रमण पुष्टि भएपछि आत्तिएका थिए । अस्पतालमै थलिने चिन्तामा थिए । छोरी र पत्नीसहित कोरोना अस्पतालमा तीन साता बिताएका नेपालगन्ज–८ का ३७ वर्षीयले आइसोलेसनमा खान, बस्न र दिन बिताउन सहज वातावरण रहेको सुनाए । आफू सुरुमा निराश रहेको उनले बताए ।
‘आइसोलेसनमा बस्नु भनेको आफू पनि सुरक्षित हुनु र अरूलाई पनि बचाउनु रहेछ,’ उनले भने, ‘आज निको भएर घर फर्किन पाउँदा ठूलो युद्ध जितेको महसुस भएको छु ।’
शुक्रबार अस्पताल परिसरमा सात वर्षीया बालिकाले पनि कोरोना भाइरसलाई पराजित गरेर घर फर्कंदै गर्दाको दृश्यले सबैलाई भावुक बनायो । उनको दायाँ हातमा चिकित्सकले दिएको फूल, बायाँ हातमा कोरोना जितेको स्वास्थ्य रिपोर्ट थियो । झोला भिरेकी थिइन् ।
चिकित्सक र नर्सले खादा लगाएर अस्पतालबाट बिदाइ गरेपछि खुसीको सीमा रहेन । ‘डाक्टरले रोग ठीक भइसकेको छ भन्नु भो । अब घर जान्छु । मम्मीलाई भेट्छु,’ उनले भनिन्, ‘धेरै दिन भो मम्मीलाई भेटेकी छैन ।’
एक वर्षीय छोरालाई आफूसँगै अस्पतालमा राखेर कोरोना पराजित गरेकी अर्की महिला अस्पतालबाट बाहिरिँदै गर्दा भावुक बनिन् । आमा संक्रमित भए पनि बालकमा संक्रमण थिएन । तर, आमाले बच्चालाई आफूसँगै राखिन् । परीक्षणमा बालकको पीसीआर रिपोर्ट नेगेटिभ आएको छ ।
अस्पतालबाट बाहिरिँदा उनले काखमा छोरा बोकेकी थिइन् । बालक मुस्काइरहेका थिए । बालक ‘खिलखिलाए’पछि अस्पतालको वातावरणमै खुसीयाली छायो । चिकित्सकहरूले कोरोना नेगेटिभ छोरालाई सँगै नराख्न सुझाएका थिए । आमाले दुधे बालक छोड्न नसक्ने अडान लिएपछि चिकित्सकको केही लागेन । ‘म पनि ठीक भइसकें, छोरा पनि ठीक छ,’ उनले भनिन् । शुक्रबार कोरोना जितेर घर फर्कनेमा एक जना गर्भवती पनि छन् ।
कोरोना जितेर घर फर्किनेको खुसीको सीमा थिएन । त्यसअघि उपचारमा खटिएका चिकित्सक र स्वास्थ्कर्मीले पनि क्यान्सर अस्पतालबाट बिदाइ गर्दा खादा लगाइदिनुका साथै फूलका गुच्छा दिएका थिए । चिकित्सकको स्वागतले उनीहरूलाई भावुक बनायो ।
कोरोनासँगको युुद्धमा सफलता पाएका व्यक्तिलाई भेट्न आफन्त र परिवार पुगेका थिए । ‘अस्पतालमा डाक्टर र स्वास्थ्यकर्मीले निकै राम्रो व्यवहार गर्नु भो । खानपिन र बस्न निकै राम्रो छ । हामीलाई जोगाउने सबैलाई धेरैधेरै धन्यवाद छ,’ घर फर्किरहेका एक युवकले भने, ‘घर फर्किएपछि केही दिन आराम गर्छु । कोरोनाबारे जनचेतना फैलाउने काममा लाग्छु ।’
दोस्रो पटक पनि कोरोना जाँच गर्दा नेगेटिभ नतिजा आएपछि उनीहरूलाई शुक्रबार घर पठाइएको भेरी अस्पतालका मेडिकल विभाग प्रमुख डा. राजन पाण्डेले बताए । संक्रमितको उपचारमा अस्पताल प्रमुख थापा र पाण्डे खटिने गरेका छन् । घर फर्किनेमा नौ महिला र १२ पुरुष छन् । पहिलो संक्रमित ६० वर्षीय वृद्ध पनि निको भएर फर्किएका छन् । कान्तिपुर दैनिकबाट